Fọfụ Ụdị Ngwá Ụrọ (4936-47-4) hplc ma98% | AASraw R & D Reagents
/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Ntụ ntụ Nifuratel (4936-47-4)
SKU: 4936-47-4. Category: R & D mmeghachi omume
Molekụla Formula: C10H11N3O5S
Ọbara arọ: 285.28
Ọmụmụ ihe ahụ gụnyere ndị ọrịa 142 na AV. Afọ dị iche iche dị iche iche n'etiti ìgwè (n = 71 ọ bụla), na nkesa ọrịa yiri: 29 (40.85%) dị mfe AV na 42 (59.15%) nke AV (AV + BV, 42.86%; AV + VVC, 30.95% ; AV + TV, 26.19%). Na ndị ọrịa na AV dị mfe, ọnụego mgbake adịghị iche dị n'etiti ntanelel raw powder-500 (26 / 29, 89.66%) na ìgwè ntanụ Nifuratel-250 (22 / 29, 75.86%). Na ndị ọrịa na mix AV, ọnụ ọgụgụ nkwụghachi dị nnọọ elu na ntụ ntụ nke Nifuratel-500 karịa nke ndị na-akpụzi na Nifuratel powder-250 (AV + BV, 88.89% vs 50.00%; AV + VVC, 76.92% vs 30.77%; AV + TV, 90.91% vs 36.36%; niile P <0.05). Naanị otu onye ọrịa (Nifuratel raw powder-500) kọrọ otu ihe omume ọjọọ (ntụgharị omume anaphylactic).
Esi Nweta Ntuziaka Nifuratel (4936-47-4) site na Nzọụkwụ na Online